Iskuulka Dhagaxtuur ee dagmada Hodan oo dib loo howlgaliyay | Radio Muqdisho
Iskuulka Dhagaxtuur ee dagmada Hodan oo dib loo howlgaliyay
Published on December 5, 2012 by admin · 1 Comment · 2,195 views
Munaasabad ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo xariga looga jarayay dugsiga Dhagaxtuur ee dagmada Hodan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munasabadan xariga looga jarayay islamarkaana dib loogu hawl galinayay dugsiga hoose dhexe ee Dhagaxtuur ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka socotay waaxda waxbarashada ee wasaaradda adeegga bulshada, maamulka degmada, madax ka socotay hay’adda waxbarashada caruurta u qaabilsan Qaramada Miboobay ee UNICEF, mas’uuliyiin ka socotay hay’adda Saacid, waalidiin iyo marti sharf kale.
Madaxa waxbarashada ee hay’adda Saacid oo aheyd hay’adda dib u howlgalisay Iskuulka Dhagaxtuur oo hadal ka jeediyay munaasbadda ayaa sheegtay in ubadka wax la baro ay tahay furaha kowaad ee lagu hanan karo dalka horumarkiisa iyadoo waalidiintana ku booriyay in ay ku dadaalaan in ay ubad kooda waxbaraan.
Madax imtixanaadka waaxda waxbarshada ahan kusimaha agaasimaha guud ee waaxdaasi Abuu Cali Axmed ayaa uga mahad celiyay hay’adda Saacid ee gacanta ka geysatay dhismaha Iskuulka waxa uuna intaasi ku daray in wax lagu farxo ay tahay hormarka waxbarasho ee ka jira Muqdisho.
c/qaadir says:	December 6, 2012 at 2:56 pm	asc asxb dhaman sln kadib waxan kufarax sanahy dugsigeya dhagax tur in dib lofuray masha alah